Egwu Na-atụ ụjọ | Martech Zone
Wednesday, June 19, 2019 Wednesday, June 19, 2019 Douglas Karr
N’izu a, mụ na otu onye ọchụnta ego mụ na ya nọdụrụ ala nọdụrụ ala. Ọ nwere ezigbo onyinye ma nwee azụmaahịa na-eto eto nke na-eme nke ọma. Dị ka obere obere azụmahịa, ọ na-ama aka na iji nlezianya dozie kalenda ya na mmefu ego ya.
Ọ nwere nkwekọrịta dị mkpa nke e mere atụmatụ na onye ahịa ọhụrụ ga-egbu oge. Ọ tinyere ahụike nke ụlọ ọrụ ya n'ihe ize ndụ n'ihi na ọ ga-etinye ụfọdụ ntinye ego na akụrụngwa dị mkpa maka ọrụ ahụ. Ọ dịghị mgbe chere na ya ga-rapaara… bụghị naanị na-enweghị revenue, ma na ugwo na akụrụngwa na-eru.
Izu ole na ole gara aga, amataghị m nsogbu ya. Ọ jụrụ ndụmọdụ m banyere saịtị ya n'ihi na ọ naghị agbanwe nke ọma ma m jere ije na ya Oge mmega ahụ. Ọ na-arụ ọrụ na ọdịnaya ahụ na ọ ga-azụlite obere vidiyo mmeghe yana.
Mgbe m soro ya n'izu a, ọ kọwaara m ọnọdụ ya. Ajụrụ m ihe ọ na-eme banyere ya. O kwuru na ya na-arụ ọrụ na saịtị ahụ, na-arụ ọrụ na vidiyo, na-arụkwa ọrụ mgbasa ozi email nye ndị ahịa ya.
Ajụrụ m, “you kpọwo ndị ahịa gị?”.
“Mba, aga m esochi mgbe m zipụchara ozi email a.”, Ọ zara.
“Kpọọ ha ugbu a.”, Ka m zara.
“N’ezie? Kedu ihe m na-ekwu? ”, Ọ jụrụ… na-echegbu onwe ya maka ịkpọ site na-acha anụnụ anụnụ.
“Gwa ha eziokwu. Kpọọ ha, gwa ha na ị nwere ọdịiche na oge gị site n'aka onye ahịa na-atụghị anya ịhapụ. Mee ka ha mata na ọ masịrị gị na gị na ha rụkọ ọrụ na ọrụ ndị anyị na-emebu ma na enwere ohere ole na ole ị hụrụ iji soro ha rụọ ọrụ. Gwa ha ka gị na ha gaa nzukọ ka gị na ha kpaa maka ohere ndị ahụ. ”
"Ana m akwadebe maka nzukọ ebe a n'otu awa, aga m akpọ ma emesịa."
“Azụmaahịa gị nọ na nsogbu, ị na-emekwa ngọpụ. Nwere ike ịkpọ otu ekwentị ugbu a tupu nzukọ gị. Know maara ya, amaara m ya. ”
Ọ sịrị: “I'mjọ na-atụ m.
“You'rejọ na-atụ gị maka ịkpọ oku ekwentị ị na-akpọghị mgbe azụmahịa gị nọ n'ihe ize ndụ?” Ajụrụ m.
“Ọ dị mma. Ana m eme ya. ”
Mgbe ihe dị ka nkeji iri abụọ gachara, ezigara m ya ozi ka ọ mara ka oku ahụ si aga. Ọ bụ obi ụtọ… ọ kpọrọ ndị ahịa na ha na-emeghe ka ohere na-arụ ọrụ ọnụ ọzọ. Ha guzobere nzukọ na-esote n'ọfịs ya n'izu a.
Kpọọ Oku ahụ
Dị ka ibe m n'elu, M obi ike na ikike m na-enyere m ahịa ma ahịa na mkpakorita usoro bụ ka ihe m na-adịghị enwe obi ụtọ… but I do it.
Afọ ndị gara aga, my onye nchịkwa ahịa, Matt Nettleton, kụziiri m ihe siri ike mmụta. O mere ka m kpọọ ekwentị n'ihu ya wee jụọ m atụmanya maka azụmaahịa. Enwetara m nnukwu nkwekọrịta site na oku ahụ nke gbaghaara m ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịzụ ahịa ahịa.
M hụrụ n'anya dijitalụ media… ọdịnaya, email, na-elekọta mmadụ media, video, mgbasa ozi… ya niile nwere oké nloghachi na ego investment echi. Mana ọ gaghị emechi gị azụmahịa taa. Nwere ike ire ụfọdụ wijetị, tiketi, na obere azụmahịa ndị ọzọ site na mgbasa ozi dijitalụ. Mana ọ bụrụ na azụmaahịa gị ejikọtaghị ya na atụmanya site na ekwentị ma ọ bụ n'ime mmadụ, ịgaghị emechi nnukwu azụmaahịa azụmaahịa azụmahịa gị.
Ọnwa ole na ole gara aga, anọ m n'ọnọdụ yiri nke ahụ. M nwere isi ahịa na gwara m na ha ga-efu ego na anyị na-aga nwere iji belata mmefu ego anyị budata. Adịghị m n'ụdị ego ọ bụla trouble na m nwere ndepụta nke ụlọ ọrụ ndị na-ama na kemgbe na kọntaktị na m na-achọ enyemaka. Mana ndị ahịa ọhụụ na - esiri ike ịwulite, siri ike iji wulite mmekọrịta ma ha enweghị ezigbo ego na itinye ego. Inweta onye ahịa ọhụụ abụghị ihe m na-atụ anya ya.
Dị ka onye ọzọ, M zutere onye ọ bụla n'ime ndị ahịa m ugbu a ma na-eme ihe n'eziokwu banyere ọdịiche ego m na-atụ anya ime. N'ime izu ahụ, agbawara m nkwekọrịta ọzọ na onye ahịa m ma nwee onyinye nke abụọ site n'aka onye ahịa ọzọ iji gbasaa njikọ ha. Naanị ihe ha mere bụ na mụ na ha na-ejikọ onwe m, na-eme ka ha mata ọnọdụ ahụ, na-esokwa ha edozi tebụl.
Ọ bụghị ozi email, vidiyo, mmelite mmekọrịta, ma ọ bụ mgbasa ozi. O were oku ekwentị ma ọ bụ nzukọ na nke ọ bụla mee ya.
Ọrịa Atọ… Na-esote
Otu ntinye na nke a. Ikwesiri ịkpachara anya itinye oge gị niile na atụmanya nke nwere ike ọ gaghị emechi. Nwere ike iji oge dị ukwuu na ahịa ndị anaghị emepụta.
Ọ bụrụ na gị na onye ahịa gị nwere mmekọrịta ma ọ bụ atụmanya - ọ ga-aka njọ. Ha nwere mmasị na gị ma chọọ ịzụ ahịa gị, mana ha nwere ike ọ gaghị enwe ike. O nwere ike ịbụ oge, mmefu ego, ma ọ bụ ọtụtụ ihe kpatara ya. Ha dị mma nke ukwuu ịgwa gị na ọ gaghị eme. Ihe ikpeazu ichoro ime bu ghota ha ma tinye mmekorita ahu na nsogbu.
Otu ezigbo enyi m nke na-azụ ahịa ụlọ ọrụ gwara m na ya nwere iwu atọ. Ọ ga-akpọ ma ọ bụ zute atụmanya, chọpụta mkpa dị, ma gwaa azịza ya. Ekem enye anam ọkpọkpọ otụk idem ita man odomo ndidi “Ihih” ma ọ bụ mechie nkwekọrịta ahụ.
Ọ bụrụ na ọ kwụsịghị, ọ na-agwa ha na ọ na-agagharị na ha nwere ike ịkpọ ya ma ọ bụrụ na mgbe mkpa dị. Ọ ga-emecha laghachi ma na-eso, ma ọ bụrụ na ha na-agaghị na-emechi n'ime ole na ole nzukọ, na ha adịghị njikere ka azụmahịa na… taa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ azụmahịa ugbu a, ịkwesịrị ịkpọ oku ugbu a.